Promotion & Event – MGL Express
Category: Promotion & Event
By Hr Webadmin Event, Promotion & Event Comments: no comments
MGL မှ ချောစာ/ချောထုပ်များ၏ သတင်းအချက်အလက်များကို အချိန်တိုအတွင်း သိရှိစေနိုင်ရန်အတွက် MGL OMS Training ကို 15.9.2019 တွင် ရန်ကုန်ရုံးချုပ်၌ သင်တန်းပို့ချခဲ့သည်။
MGL တရားဝင် ပြည်တွင်းပြည်ပ အမြန်ချောပို့ မှ လုပ်ငန်းများ ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန် အတွက် ၊ SAP Financial Software သင်တန်းကို 8.9.2019 တွင် ရန်ကုန်မြို့ MGL သင်တန်း ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုသင်တန်းသို့ MGL ရုံးချူပ် Finance Department မှ ဝန်ထမ်းများ အားလုံး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
MGL အမြန်ချောပို့မှ အသိပေး ကြော်ငြာခြင်း။ မြန်မာနိုင်ငံ တစ်ဝှမ်း မြို့ ပေါင်း (၁၃၂) မြို့ကျော်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော MGL ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အမြန်ချောပို့ လုပ်ငန်း၏ MGL စာအိတ်၊ စာရွက် /စာတမ်း၊ ပြေစာ ၊ ဘောက်ချာ၊ MGL တံဆိပ် ( Logo ) ၊ ဆိုင်းဘုတ် အမှတ်အသားများ၊ ဖုန်းနံပါတ်များ၊ အသုံးပြု ပြီးသော MGL လက်ခံစာရွက်များ ( Waybill ) ၊ MGL နှင့် ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများအား အတု...
ဖောက်သည်များ၏ တောင်းဆိုချက်၊ လိုအပ်ချက်များကို အမြဲ ဖြည့်စည်းပေးနေသည့် MGL တရားဝင် ပြည်တွင်းပြည်ပ အမြန်ချောပို့မှ ယင်းမာပင်မြို့ တွင်ရုံးခွဲထပ်မံ တိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်၍ ပုလဲမြို့ကိုပါ ဝန်ဆောင်မှု့ ပေးနေပါပြီ။ ယခု မြို့များ အပါအဝင်ပြည်တွင်း မြို့ပေါင်း(၁၃၂)မြို့သို့ ချောစာ/ချောထုပ်များကို အပြန်အလှန်ပေးပို့နိုင်ပြီး ၊ ထိုမြို့များမှတဆင့် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း(၁၅၀) ခန့်သို့ ချောစာ/ချောထုပ် များကို တာဝန်ယူ ပို့ဆောင်ပေးနေပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်။ ။ (က)ရပ်ကွက် ၊မုံရွာ-ပုလဲ-ဂန့်ဂေါ လမ်းမကြီးဘေး၊ ယင်းမာပင်မြို့။ ဖုန်း။ ။ 09 797 393 555
MGL တရားဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပ အမြန်ချောပို့နှင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ ယာဉ်များ မောင်းနှင်ပြီး ဝန်ဆောင်မှု ပေးနေသော MGL အမြန်ချောပို့ ဝန်ထမ်းများအတွက် ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ အသိ ပညာပေး ဟောပြောပွဲကို ရန်ကုန်မြို့တွင် ၁၈.၈.၂၀၁၉ ၌ကျင်းပခဲ့သည်။ ထိုဟောပြောပွဲသို့ မရမ်းကုန်း ယာဉ်ထိန်းတပ်ဖွဲ့မှဒုတိယရဲမှူး အုန်းကျော်၊ ယာဉ်မှုစစ် ရဲအုပ် စောဝင်းတို့ တက်ရောက်ဟောပြောဆွေးနွေးပြီး MGL ရုံးချုပ်နှင့် ရန်ကုန်ရုံးခွဲမှ ဝန်ထမ်းပေါင်း (၆၀)ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဟောပြောပွဲတွင် Powerpoint ဖြင့် ရှင်းပြခြင်း၊ ဓာတ်ပုံ များဖြင့်ရှင်းပြခြင်းတို့ဖြင့် ဟောပြောဆွေးနွေးပြီး တက်ရောက်လာ...
By Hr Webadmin Promotion & Event, Uncategorized Comments: no comments
Things You Won't Like About Writing Help and Things You Will After two No-Shows, they won't be able to book an appointment before following term. Thus, the students often get confused which to select. Many students are inclined to use the very same words...
By webadmin Promotion & Event, Services Comments: one comment
Magnate Group Logistics Company Limited was established in August 2004 operating in various logistic businesses and later obtained domestic express courier operating license in June 2012. We therefore arealegally licensed domestic express courier service provider. From this establishment, we are able to...
Affordable Flights – Tips For Looking After Your Essays
Essay Writing On The Web – Essay Topics You Need to Consider
Essay Assist For College – How to Get the Best Essay Assist For College
Everything You Will Need To Know About Term Paper Writing Services
Composing Process – The Research Paper
Strategies For Sale – How to Find Inexpensive Cells For Sale
Edited at 23.06.2020 – Grad school application essay sample
Understanding Standard Speed Vs Time for Physics Projects
Biochemistry Classes ProduceaEffective Basis For the Biological sciences
How to Choose the Most Useful Free Photo Editor Online
Strategies For Sale – The Way To Find Free Writing Function
What’s the Most Effective Free Photo Editor For My Mac?
Benefits Of Custom Paper For Your Organization
How To Utilize the Greatest Free Photo Editor Online
On the Web Photo Editing Tutorials
This write-up provides youabrief introduction to Kinga Mathe. What’s Kinga Math? Is it just one other name for the memory? Or is there way more there?
Photoediting in Home is Not Difficult to Do!
What to Think about Before UtilizingaPhotograph Editor on the Web Free
Photo Editor – Find out The Best Way to Make Use of Photo Editor To Get Photo-editing
Avoiding Common Pitfalls When You’re Writing an Essay
How Using an Image Editor Online Can Save Time and Money
The coaching fire brigade personnel really should also be expanded and intensified to meet these expanding specifications.
Pharmaceutical biology is usuallyapeer assessment professional health-related journal that publishes scientific investigation in relation to new drug improvement, health and drug toxicity analysis.
Bad Credit Payday Loan: Apply Online For A Perfect Loan WithaBad Credit Score
Tips For Choosing the Most Effective Free Photo Editor on the Web
Learn to Compose My Essay For Me – Can it Right
Photo Editor Online –3Tips on Finding the Fantastic Program
Online Payday Loans – Where to Get the Best Bank
Learn How to Create Your Photographs Stand Out
Term Paper Writing Services – Selecting the Correct Online Essay Writing Service
Some Cool Photo Editing Tools For Your Internet
Learning How To Make Use ofaFree Photo Editor on the Web
What Would You Create WithaFree Photo Editor on the Web?
Tips For BuyingaPhotograph Editor Online
A Good on the Web Photo Editor Is Essential Have
Everything You Need to Know Before Using an Image Editor on the Web
Online Paydayloans on the Web Can Be Legitimate Organizations
How to Write My Paper Cheap – The Ideal Means to Do It
Choosing The Greatest Free Photo Editor On Your Mac
The Way To Select the Ideal Payday Loans